Ekipa teknika miainga - Yangzhou qiangjing fanatanjahantena Co,, Ltd
Manoloana ny fisian'ny fanitsiana tsikelikely ny firafitry ny indostrian'ny fanatanjahantena sy ny fitomboan'ny fahafantarana ny fanatanjahan-tena ankapobeny, ny fampidirana sy ny fampiharana ny politika mahasoa, ny fampandrosoana ny indostrian'ny fanatanjahantena dia mitombo amin'ny "vanim-potoana tsara indrindra." Ny tontolon'ny indostria ara-panatanjahantena dia nivoatra tamin'ny lafiny rehetra, mihena ny fizotran'ny tsena, ary lehibe ny haben'ny tsena ho an'ny indostria mifandraika.
Miampy ny fitomboan'ny fidiram-bolan'ny mponina, dia mitombo hatrany ny fahafantaran'ny mponina ny fanatanjahantena sy ny fahatanjahana ary mitombo ny fepetra takina amin'ny fitaovam-piarovana ara-panatanjahantena. Voaloa lafo be amin'ny manakarama ireo teknisianina famolavola manerantany amin'ny famolavolana hamorona ny marikao manokana • DHS, iray amin'ireo marika fanatanjahantena vitsivitsy manana hery miasa eran-tany any Shina; • YONEX, marika malaza eran-tany.
Miaraka amin'ny ezaky ny ekipa mpivarotra sy ny ekipa aorian'ny varotra, Miara-miasa sy tsena: Ho fanampin'ny trano an-trano, ny vokatra fitaovam-piarovana ara-panatanjahantena antsika dia aondrana any Amerika Avaratra, Eropa, Afovoany Atsinanana ary firenena sy faritra hafa.